Asam-panjakana : Nodiovina ny tontolon’ny fandoavan-karama -
AccueilRaharaham-pirenenaAsam-panjakana : Nodiovina ny tontolon’ny fandoavan-karama
Manoloana ny fahatapatapahan’ny karama ho an’ny mpiasam-panjakana sasantsasany amin’izao fotoana izao, dia nanome fanazavana i Razafintsalama Ihanta Sahondra, Tale Jeneralin’ny Foibem-pitondrana misahana ny Fitantanana ara-bolan’ny mpiasam-panjakana (DGGFPE). Tahaka ny natao tamin’ny fanadiovana ny tao amin’ny sehatry ny fisotroan-dronono dia niditra tamin’ny fanadiovana teo amin’ny resaka fandoavana ny karaman’ny mpiasam-panjakana ihany koa ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola. Tafiditra ao anatin’ny fampiharana ny paikady ho an’ny fanjakana tsara tantana izany. Tao anatin’izay dia nojerena sy naraha-maso ny karama avoaka ho an’ny mpiasam-panjakana ho setrin’ny asa vita. Natao izao fanadiovana izao noho ny fiheverana fa misy ireo olona tsy miasa sy tsy hita any amin’ny toeram-piasany anefa mandray karama.
Voalaza fa, efa tamin’ny volana febroary 2017 dia efa nampahafantarina an’ireo mpitantana ny mpiasa eny anivon’ny minisitera rehetra izany asa fanadiovana izany ary natrehan’ ny ministeran’ny Asam-panjakana sy ny asa. Nambara azy ireo fa hisy ny fanaraha-maso atao amin’ny karaman’ny mpiasam-panjakana, mba ahafantarana hoe iza no tena mpiasa? aiza? ary manao inona? Ny volana marsa ka hatramin’ny volana mey 2017 no nidina tany amin’ny faritra ny tompon’andraikitra, nanazava ilay fandehan’ny « Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources Humaines de l’Etat (AUGURE) » ampidirana ny anaran’ireo mpiasam-panjakana tena mbola miasa. Ny mpitantanana ny mpiasa ao amin’ny minisitera mpampiasa no mampiditra ny anaran’ny mpiasany ao aminy ao anatin’io AUGURE io. Nanomboka ny volana jona ka hatramin’ny septambra kosa no natao ny fanazavana ny fampiasana io AUGURE io taty amin’ny minisitera foibe.
Rehefa izay dia nomena fe-potoana hatramin’ny volana oktobra 2017 ny rehetra mba hamerenany ny lisitr’ireo mpiasan’ny minisitera tsirairay amin’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola ka nivoaka io volana oktobra 2017 io ihany ny lisitra voalohany. Tao aorian’ny fifampiresahana dia tapaka fa omena fe-potoana lavalava ireo tompon’andraikitra hanamarina tsara ny isan’ny mpiasa ao aminy ka ny volana novambra indray no namerenana ilay lisitra. “Ny volana novambra izany dia efa tokony efa samy nampiditra ny mpiasany rehetra amin’io lisitra io ny mpampiasa rehetra. Tamin’izay dia nahatratra 17 204 ny mpiasa hita fa andoavana vola nefa tsy voasoratra any amin’ireo lisitra nomen’ireo minisitera. Nampitahana amin’ny lisitry ny olona andoavan’ny ministeran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola karama izany, ary mbola nahita 9 782 mpiasa izay tsy nisy nanamarina ny maha mpiasa azy eo anivon’ny minisitera. Izany hoe andoavana karama fa tsy voasoratra ao anatin’ny lisitry nomena ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola”, hoy ny Razafintsalama Ihanta Sahondra, Tale Jeneralin’ny DGGFPE.
Raha tokony ho tamin’ny novambra no efa tapaka ny karaman’izy ireo, dia efa nahemotra hoe volana desambra 2017 indray izany araka ny fanazavan’ny Tale Jeneralin’ny Foibem-pitondrana misahana ny Fitantanana ara-bolan’ny mpiasam-panjakana. Mety ho betsaka ny antony nahatonga ny mpampiasa azy tsy nahavoasoratra ilay mpiasany. “Marihina anefa fa tsy voaroaka ireo mpiasa ireo fa entanina araka izany ny mpitantana ny mpiasa mba hitondra fanamarihina aty amin’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola fa tena mpiasa ao amin’ny minisitera izay sahaniny avokoa ireo mpiasa. Raha voamarina fa tena mpiasa ara-dalàna ilay olona dia ezahina ny hamoaka ny karaman’izy ireo alohan’ny faran’ny taona”, hoy hatrany ny fanazavana.
Tsy mipetraka intsony ny fahatokisan’ny mpiasa. Miverina indray mantsy ny olana eo amin’ny fandoavan’ny kaominina Antananarivo-Renivohitra (CUA) ny karaman’ny mpiasa. Raha ny vaovao voaangona, tsisy nandray ny asany ireo mpiasa teny amin’ny biraon’ny kaominina teny ...Tohiny